ထိုကြောင့်သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက် | Apg29
451 online! | Sidvisningar idag: 51 662 | Igår: 151 233 |
ထိုကြောင့်သင်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်အဘယ်ကြောင့်ငါသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခံရဖို့လိုအပ်သလဲ?- ။ သင်ပေမယ့်ယရှေုသညျ irretrievably ထာဝရငရဲမှပျောက်ဆုံးကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ရန်လိုအပ်ပါတယ်သိမ်းဆည်းကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ဆိုလိုသည်။ သငျသညျယရှေုခရခံယူကြသောအခါကယ်တင်နိုင်ခဲ့သငျသညျရရှိသွားတဲ့။ ဒါဟာသင်ယရှေုသညျလကျမခံပါဘူး, ဒါပေမယ့်သင်ပြီးသားပျောက်ဆုံးလျက်ရှိပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်ချနိုင်မှနျလြှငျ, သငျသညျယရှေုသညျလကျခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ပျောက်ဆုံးမည်ကိုမဟုတ်ပါဘူး။ ယရှေုခရသင်တို့ကိုကယ်တင်ရန်ဤလောကသို့ကြွလာ။ သူသည်သင်၏အပြစ်များကိုအလုံးစုံတို့အဘို့ကားတိုင်ပေါ်တွင်အသေခံ, သင်ျဂွိုဟျ, ဒါပေမယ့်သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ဘုရားသခင်ကရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့သည်။ ယရှေုသညျယနေ့အသကျရှငျနှငျ့သငျသညျယရှေုခရစျသခံယူကြသောအခါသင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်စေပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကယျတငျခွငျးသို့ရောမည်ဖြစ်ပြီးအားလုံးသင်၏အပြစ်ကိုလွတ်ရနိုင်အောင်သင်မည်သို့သညျယရှေုကိုလက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ယရှေုသညျကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့နှုတ်ဖြင့်ကျယ်သောအသံနှင့်ဆင့်ဆိုရမည်မှာ:ယရှေု, ယခုတွင်ငါသည်သင်တို့ခံယူကြလော့။ ငါသည်သင်တို့ကိုငါ့အပြစ်ကြောင့်အသေနှငျ့ဘုရားသခငျသုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သေခြင်းမှထမြောက်စေတော်သင်ကယုံကြည်ကြသည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုထာဝရဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုဝန်ခံ။ ယခုတွင်ငါသည်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်မှလွှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသင်သညျယရှေုကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အာမင်။သငျသညျယခုသညျယရှေုကိုလက်ခံရရှိခဲ့, ထို့နောက်သင်သည်ယခု (ရွေးနှုတ်တော်မူ) ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်နှင့်အပြစ်မှလွှတ်ကြသည်!သငျသညျယရှေုကိုခံယူခဲ့သလား" ဟုတ်ကဲ့!- ဂုဏ်ယူပါတယ်!သို့သော် [ယေရှု] ကိုယ်တော်ကိုလက်ခံရရှိအဖြစ်များစွာသောသူ၏နာမကိုအပေါ်ယုံကြည်သောသူတို့အဖို့, ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏။ (ယောဟန် 1:12)Christer Åbergwww.apg29.nu
RFID ချစ်ပ်များ၏ Sanna ရဲ့အိပ်မက်အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils "ထိုအခါအကြှနျုပျသ chip ကိုကြိုက်နှစ်သက်မှ, stepwise (ဖြည်းဖြည်း), ဒါကြောင့်သူပြီးသားပရိုဂရမ်နှင့် brainwashed ထားပြီးဆိုလိုကြောင်းသိသည်။ "92Läs allt!"သားရဲ၏ လာ. ကွညျ့"အားဖြင့် Reader ကိုမေးလ် nils
Photo: Express ကို။ ဆွီဒင်ယနေ့ခုနှစ်တွင်အကြမ်းဖက်မွတ်စလင်အစွန်းရောက်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရှိပါတယ်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းအဆိုပါတိုးပေါက်ကွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။7Läs allt!ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုအော်ဟစ်အရေးပေါ်အယောန Hjalmarsson ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်လုံလောက်ကြောင်းသက်သေခံ၏။6Läs allt!ကလေးသူငယ်များမဲပေးရ?အစိမ်းရောင်ပါတီ Lorentz Tovatt ပါလီမန်မှာအာသနန်းစံ Romsons လက်ထောက်အဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ 2013 ခုနှစ်တွင်သူသည်မဲပေးအသက်အရွယ်ဖျက်သိမ်းနှင့်ကလေးငယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးရသင့်ကြောင်းသင့်ကြောင်း Twitter တွင်ရေးသားခဲ့သည်!6Läs allt!ဂျဟန္နမ်ငရဲဘုံကိုအသငျးတျောကျော်တန်ခိအဘယ်ကြောင့်ငရဲကိုအသင်းတော်ကျော်တန်ခိုးမရှိရှိသနည်း သခင်ဘုရားသည် - ယေရှုခရစ်တော်၏မေရှိယကိုသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ယရှေုသညျမေရှိယကို, သခင်ခဲ့လျှင်, အားလုံးငရဲအသငျးတျောကိုအုပ်စိုးခဲ့ကြပေသည်။3Läs allt!ရှုပ်ထွေးသိပ္ပံပညာရှင်များဝဠာကြောင်း ..
ရသည်မှာသင်တစ်ဦးပြားချပ်ချပ်မွကွေီးပျေါမှာယုံကြည်ဖို့ကယ့်ကိုမိုက်မဲဖြစ်ရန်မလိုပါ ... တောင်းပန်ပါတယ်ငါအပြားဝဠာကိုဆိုလို! ဒါဟာပုံသိပ္ပံပညာရှင်များနှင့်ပါမောက္ခများလညျးပွုနိုငျသညျ!3Läs allt!
Dagens bibelord “Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen; ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets krona, vilken Gud har lovat åt dem som älska honom.” (James 1:12) I dag är det 26/06-2017 kl. 09:07 v. 26 och Jesus söker
လေးမှားယွင်းသောဘာသာတရားများအတွက်ပုတီဗုဒ္ဓဘာသာ, ဟိန္ဒူဘာသာ, အစ္စလာမ်နှင့်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းလေးမှားယွင်းသောဘာသာတရားများအကြားဘုံပိုင်းခြေရှိပါသည်။ ထိုသို့လူတိုင်းပုတီးရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။1Läs allt!
När jag publicerade bloggposten Jesus i koranen och citerade från koranen så slog det mig hur likt katolska kyrkans syn på Maria som koranen har.5Läs allt!Endast hos Jesus finns frälsningen - Femte delenDet är Jesus som gör miraklet. Det är han som föder dig på nytt och gör dig till en ny skapelse. Det är han som förlåter alla dina synder. Inte du. Du har bara att ta emot Jesus så gör han undret.0Läs allt!Aktuelltသငျသညျလက်ဝါးကပ်တိုင်အကြောင်းတရားဒေသနဥပုသ်လ 15 ရက်အကြာမှာဦးသေဆုံးပြီး 1053မွတ်စ်လင် 10 နှစ်ကြားရှိဆရာများခေါင်းဖြတIS-blogg uppmanar till terror i Sverige666 ကုရ်အာန်စတင်12 ရက်အတွင်းနိုင်ငံပေါင်း 21 နိုင်ငံအတွက်ဿသိပ္ပံပညာရှင်များသည်တစ်ဦးဦးခေါင်းခကောင်းမွန်သောသတင်း: အပြစ်တရား၏အအစပြုပြ&အီရန်နိုင်ငံမှာဿွာန်ကြောက်မက်ဘွယ်သော50 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းခြောက်ယောက်နေ့ကစ